1 - BookCubicle
Author : Lia K
Genres : Adventure, Mystery
Original Author : Christie Golden
Notify me for new chapters
Buyacup of Coffee for Author
ကျွန်ုပ် အမည်မှာ Thrall ဖြစ်သည်။ လူ့ဘာသာစကားနှင့်ဆိုလျှင်တော့ "ကျွန်" ဟု
အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဤအမည်၏ နောက်ကြောင်းမှာ ရှည်လွန်း၍ သက်သက်ပြောယူရပေမည်။
ကျွန်ုပ်သည် သွေးကြောထဲတွင် စီးဆင်းနေသော ဘေးဘိုးများ၏ စိတ်ဝိဉာဉ်နှင့် အာဇာနည်သွေးတို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ Orcs လူမျိုးစု၏ စစ်အကြီးအကဲနှင့် Horde ဟု ခေါ်သော မျိုးနွယ်စု၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာရခြင်း၏ နောက်ကြောင်းမှာလည်း ရှည်လှပြန်သည်။
ဂုဏ်သရေရှိလှသော ဘိုးဘေးများအကြောင်းမတိုင်ခင် ကျွန်ုပ် ယခုပြောလိုသော အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်၏
ဖခင်နှင့် သူ့ကို ယုံကြည်အားကိုးခဲ့ကြသူများအပါအဝင် သစ္စာဖောက်ခဲ့ကြသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏
ကျွန်ုပ်တို့မျိုးဆက်များသည် သည်အဖြစ်အပျက်များအား သေချာ မသိလှချေ။ ပညာရှိသည်ဆိုသော နတ်ဆရာ Drek'Thar ပင်လျှင် မပြောပြနိုင်။ ကံကြမ္မာသည် များပြားပြီး ကွဲပြား ရှုပ်ထွေးလှသဖြင့်
စိတ်ပုံမှန်ရှိသော မည်သူမဆို "အကယ်၍များ..." ဟု ဆိုကာ ရာရာစစ သံသယ မဝင်သင့်ပေ။ ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှသည် ပြီးပြီသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ရွေးချယ်ခဲ့သော အရာမှန်သမျှကို မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ
ဤဇာတ်လမ်းသည် orc များ၊ tauren များ၊ forsaken များ၊ ဘီလူးများနှင့် သွေးမှင်စာများပါ
ရောပြွမ်းနေသည့် မျက်မှောက်ခေတ် လျော့တိလျော့ရဲ Horde မျိုးနွယ်စု အကြောင်း မဟုတ်ပေ။
Horde ဆိုသည့် မျိုးနွယ် ဦးဆုံး ပေါ်ထွန်းလာစဉ်က ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။
Horde မျိုးနွယ်သည် အခြားကလေးများ မွေးသလိုပင် သွေးနှင့် နာကျင်မှုများ အပြည့်ဖြင့် မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Horde ၏ ငိုသံစူးစူးမှာ ၎င်း၏ ရန်သူများအတွက် သေမင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
လူစိမ်းထံမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော စွမ်းအင်သည် ကြီးကျယ်သည့် အသံနှင့် တုန်ခါမှုများ
အဖြစ်လှည့်လည်သွားကာ သူ့နောက်တွင် ဝတ်ရုံကဲ့သို့ စီးဆင်းသွား၍ ခေါင်းပတ်လည်တွင် သရဖူအသွင်ရှိသော အလင်းတန်းလေး အဖြစ် ဝန်းရံသွားသည်။ ထိုအသံကို စိတ်ထဲမှာပါ ကြားနိုင်ပြီး
မေ့လျော့နေသော သီချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်အား ရုတ်တရက် ပြန်မှတ်သွားသလိုမျိုး သွေးထဲတွင်
ထိုလူ ကမ်းလှမ်းသည့်အရာမှာ မက်လောက်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရင်ထဲတွင်
သို့သော် .... သို့သော် တစ်ခုခုမှားနေပြီ.....
လူစိမ်း ပြန်သွားသောအခါ Eredar ခေါင်းဆောင်များသည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လှည့်၍ စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်၍ ညင်သာစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
" သူ ပေးတဲ့ဟာက သိပ်တော့ မလုံလောက်ဘူး"
ပထမတစ်ယောက်ကပြောပြီး ရုပ်လောကတွင်ရော နာမ်လောကတွင်ပါ ခြေလက်ဆန့်လိုက်ကာ စွမ်းအားများကို ရှေ့သို့ ပဲ့တင်ထပ်စေလိုက်သည်။
" အဲ့ဒီ့လို စွမ်းအားမျိုး.."
ဒုတိယတစ်ယောက်က အတွေးလွန်နေဟန်ဖြင့် ရေရွတ်လိုက်သည်။ သူကတော့ ကြော့ရှင်းလှပကာ မွန်မြတ်သော စွမ်းအားများ ဖြာထွက်နေရှိသည်။
" ပြီးတော့ သူပြောတာကလည်း အမှန်ပဲ။
သူ ငါတို့ကို ပြသွားတဲ့ဟာက ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ့်ဟာ။
ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ဘယ်သူက လိမ်နိုင်မှာလဲ "
တတိယတစ်ယောက်ကတော့ ဘာမှ မပြောပေ။ ဒုတိယလူပြောသွားသည်မှာ အမှန်ပင်။
ထိုလူစွမ်းပြောသွားသော နည်းလမ်းမှာ သူပြောသမျှ အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြနေကြောင်း သူတို့ အားလုံး သိကြသည်။ သို့သော်... ဒီလူ Sargeras....သူ့ထံတွင် Velen မနှစ်မျို့သော တစ်စုံတစ်ခု ရှိနေသည်။
အခြား ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်သည်လည်း Velen မိတ်ဆွေများပင် ဖြစ်သည်။ သူကမူ သုံးယောက်ထဲတွင် အားအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် Kil'jaden နှင့် ပိုရင်းနှီးသည်။ ထို Kil'jaden က Sargeras ကမ်းလှမ်းခြင်းအား
စိတ်ညွတ်နေခြင်းကို Archimonde ထက် Velen က ပိုစိတ်ပူသည်။ Velen သဘောထားကို
Kil'jaden က သူ့မာနလောက် အလေးမထားကြောင်းကို သိသော်ငြား။
Velen က Sargeras ပြသွားသော ပုံရိပ်ကို ပြန်တွေးကြည့်သည်။ သူတို့ သိမ်းပိုက်ရမည့် ပိုအရေးကြီးသည်မှာ ရှာဖွေ စုံစမ်းရမည့် လောကများ ၊ ထို အရာအားလုံးကို Eredar တို့က သိချင်နေကြသည်။ စွမ်းအားကြီးမားသူများဖြစ်၍ အသိပညာကိုသာအသားငါးလို စားသုံးကြသူများကို Sargeras ကသရေကျလောက်စရာအရာအား ရိပ်ခနဲအယောင်ပြသွားသည်။ ထိုအရာများမှာ သူတို့ အပိုင်နေ့ချင်းညချင်း ဖြစ်လာနိုင်ပေသည် .. အကယ်၍...အကယ်၍... သူတို့သာ Sargeras ထံတွင် သစ္စာတော်ခံကြမည်
ဆိုလျှင် ပေါ့ ...။ မျိုးနွယ်တစ်စုလုံးကို ပေးပစ်ရမည့်ကိန်းပင်။
" Velen တို့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ပူနေပြန်ပြီ "
Archimonde က ပြောသည်။ ထိုစကားမှာ ချီးကျူးစကား ဟု ယူဆ၍ရသော်လည်း Velen ကမူ
အနှိမ်ခံလိုက်ရသလို အထိနာသွားသည်။ Archimonde ဘာလိုချင်နေလဲ သူသိပါသည်။
သူ စိတ်မပြတ်မသားဖြစ်နေခြင်းမှာ ယခု Archimonde အလိုရှိနေသော အတားအဆီး ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း
Velen သိသည်။ သူ ပြုံးလိုက်သည်။
"ဟုတ်တယ်။ ငါက စိတ်ပူတတ်တယ်။
ဘယ်နှခေါက်ရှိပါပြီလဲ ပြတ်သားတတ်တဲ့ Archimonde နဲ့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်တဲ့
Kil'jaden တို့ ခင်ဗျား "
ထို နှစ်ယောက်စလုံး ရယ်လိုက်ကြ၍ Velen စိတ်ထဲနွေးသွားလေသည်။ ထို့နောက် သူတို့ တိတ်သွားပြန် သည် ။ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း Velen သိလိုက်သည်။ သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ပါစေ ဟု
Velen ဆုတောင်းလိုက်သည်။ သူတို့ ၂ယောက် ထွက်သွားတာကို ကြည့်ရင်း သူ ရင်မောလာသည်။
သူတို့သုံးယောက်၏ ခြားနားသော ပုံစံများက
အချင်းချင်း ပြန်ထိန်းသွားသဖြင့် သူတို့သည်အလုပ်ကို အမြဲ အဆင်ပြေစွာလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ ရလဒ်မှာ သူတို့ လူမျိုးများ၏ သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုပင်ဖြစ်သည်။ Kil'jaden နှင့် Archimonde တို့သည် ၎င်းတို့၏ ကောင်းကျိုးကိုသာ မကြည့်ဘဲ နောက်လိုက်များ၏ ကောင်းကျိုးကိုပါ ကြည့်တတ်သော
တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်သူများဖြစ်ကြကြောင်း Velen သိသည်။ သူသည်လည်း ထိုသို့ သဘောထားရှိသူဖြစ်၍ ကိစ္စတိုင်းတွင် သူတို့သုံးယောက် အစဉ် သဘောညီခဲ့ကြသည်။
Velen မျက်မှောင်ကြုတ်မိသည်။ အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်ရပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော
Saegeras ကို သူ သံသယဝင်နေမိပါသနည်း။ အခြားနှစ်ယောက်သည် ထိုသူ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို
လိုလားနေသည်မှာ အထင်အရှားပင်။ Eredars လူမျိုးစုသည် သူလိုချင်သောပုံစံ အတိအကျပင် ဖြစ်ကြောင်း Sargeras ကပြောခဲ့သည်။
သန်မာ၍ စိတ်အားထက်သန်ပြီး ခန့်ညားကာ သူ့ထံသစ္စာတော်ခံနိုင်မည့်၊ လောကအားလုံးကို အတူတကွ ပေါင်းစည်းပေးနိုင်မည့် သူတို့လို လူမျိုးများကို Sargeras အလိုရှိသည်။ သူက Eredar တို့ကို
အဆင့်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ကို ပြောင်းလဲပစ်ပြီး ပိုကောင်းမွန်သော သူများ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမည်။
စကြဝဠာထဲတွင် မည်သူမျှ မမြင်ဖူးသေးသော လက်ဆောင်များ ပေးမည်။ Sargeras ပြောသည့် စွမ်းအားပမာဏမှာ များပြားလွန်း၍ မည်သူမျှ မခန့်မှန်းဖူး။
Sargeras ပြောသွားသည့် အရာများကလည်း သေချာပေါက် ဖြစ်မည့် အရာများပင်ဖြစ်သည်။
Velen က သူ ပြဿနာ မတက်ခင် တစ်ခါတလေ သွားခဲ့ဖူးသော ဘုရားကျောင်းကိုသွားသည်။
ဒီညတွင် အခြားသူများလည်း ရှိနေသည်။ အထွဋ်အမြတ်ထားသော ata'mal ကျောက် အား ကာရံထားသည့် တစ်ခုတည်းသော တိုင်လုံးကို စက်ဝိုင်းပုံ ဝန်းရံ၍ ထိုင်နေကြသည်။ ထိုပစ္စည်းမှာ ရှေးကျလွန်းလှသဖြင့် ၎င်း၏ ဇာစ်မြစ် ဘယ်က စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့မှန်း Eredar မျိုးနွယ်ဝင် တစ်ယောက်မျှ အတိအကျ မသိကြ။ ဤကျောက်တုံးသည် သူတို့မျိုးနွယ်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စကြဝဠာရှိ အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါ
တိုးတက်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ကတော့ အမှန်ပင်။ ဆေးဝါးကုသခြင်း နှင့် မှော်အတတ်များသာမက
ယခု Velen ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော ရှေ့ဖြစ်ဟောခြင်း အတွက်ပါ ၎င်းကို အသုံးချခဲ့ကြသည်။
သူသည် ရှေ့သို့ တိုးသွားပြီး တြိဂံပုံစံရှိ ထိုကျောက်တုံးကို လေးစားသမှုဖြင့် ထိတွေ့လိုက်သည်။
အကောင်သေးသေးကလေးတစ်ကောင် ဝင်ခွေလိုက်သလို နွေးထွေးမှုကြောင့် Velen စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားသည်။
Velen ကအသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပြီး စွမ်းအင်များအား သူ့ကိုယ်ထဲသို့
ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့လက်ကိုလွှတ်ချကာ စက်ဝိုင်းထံသို့ ပြန်လာလိုက်သည်။
Velen သူ့ မျက်လုံးများအား ပိတ်ချလိုက်သည်။
သူသည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အာရုံခံအင်္ဂါအားလုံးရော စိတ်နှင့် ဝမ်းတွင်းပါ မှော်ဗီဇကိုပါ ဖွင့်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး သူရသည့် အာရုံမှာ Sargeras ပြောသမျှ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံလိုက်သယောင်ရှိ၏ ။
သူသည် သူတို့၏ မြင့်မြတ်သော လူမျိုးစုသာမက အခြားသော လောက အများအပြား၏ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော Kil'jaden နှင့် Aechimonde တို့ဖြင့် အတူ ရပ်နေသည်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရသည်။ သူတို့ဘေးတွင် စွမ်းအားများက တောက်ပလျက် ။ Velen သုံးဆောင်ဖူးသော ယမကာ အားလုံးထက် ယစ်မူးဖွယ်ကောင်သော စွမ်းအားမျိုး ။ တောက်ပနေသော မြို့တော်များကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီး ထို မြို့သားများက သူတို့ရှေ့မှောက်တွင် ဝပ်တွားကာ ဂုဏ်ပြု ချီးမွမ်းစကားများ ဟစ်ကြွေးကြ၍
သစ္စာတော်ခံနေကြသည်။ Velen တစ်ခါမျှ စိတ်ပင် မကူးဖူးသော နည်းပညာများက သူ့ရှေ့မှောက်တွင်
ခစားနေကြသည်။ ထူးဆန်းသော ဘာသာစကားနှင့် ရေးသားထားသော ကျမ်းဂန်များကို သူ့အတွက်
ဘာသာပြန်ပေးထားကြပြီး တစ်ခါမျှ မကြားဖူးသော မှော်အတတ်ပညာများကို အတိုင်းသား လှစ်ဟာပြနေ
အရာအားလုံး ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသဖြင့် သူ ရင်ခုန်နှုန်း မြန်လာသည်။
သူ့ မိတ်ဆွေ Kil'jaden ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ သူက ပြုံးပြနေ၏။ Archimonde ကလည်း
ထို့နောက် Velen သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။
သူ အလန့်တကြား အော်ဟစ်လိုက်မိသည်။
သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆမတန်ကြီးမားနေကာ လိမ်ပိန်ပြီး ပဲ့ရွဲ့နေသည်။ ယခင်က အပြာရောင်ပြေပြေဖြစ်ခဲ့သော အသားမှာ ယခု ညိုမည်းနေပြီး ရောဂါဖြစ်ထားသော သစ်ပင်တစ်ပင်လို ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်နေသည်။
သူ့ကိုယ်မှာ အလင်းရောင်ဖြာထွက်နေသော်လည်း စွမ်းအင်ရှိသော အရောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲ မနှစ်မြို့်ဖွယ်
အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ သူ့မိတ်ဆွေ ခေါင်းဆောင်များကိုလည်း ကမန်းကတန်း ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ
သူတို့လည်း ပုံပြောင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခင်က သူတို့၏ပုံစံနှင့် တစ်စက်ကလေးမျှပင် မတူတော့ချေ။
တစ်ခုခု ကြောက်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင် မှားနေပြီ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် Eredar စကား။
မှားယွင်းသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုက သူ့ရင်ထဲကို ဓားတစ်ချောင်းလို စိုက်ဝင်သွားသည်။
သူ ထပ်မံအော်ဟစ်လိုက်ပြီး ဒူးထောက်လျက် ပြိုလဲသွားသည်။ Velen က ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်နေသည့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ အကြည့်လွှဲကာ Sargeras ကတိပေးခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့် အသိပညာ အတတ်ပညာများကို ရှာဖွေမိသည်။ သို့သော် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုသာ သူတွေ့လိုက်ရသည်။ ယခင်က ဟစ်ကြွေးပျော်ရွှင်နေကြသော လူအုပ်ကြီးနေရာတွင် ယခုမူ ခြေပြတ်လက်ပြတ်ဖြစ်နေသော အလောင်းများက နေရာယူထားသည်။ အလောင်းအားလုံးသည် သူတို့လိုမျိုး မကောင်းဆိုးဝါးပုံစံများသာ။ ထိုအလောင်းများကြားထဲ၌ ကျောတွင် အဆူးများထွက်နေသော ခွေးများနှင့် အလောင်းများကို ကြည့်ကာ မြူးတူးနေသည့် လိမ်ပိန် စုတ်ပြတ်သော
အကောင်ငယ်များ ။ အမြင်အားဖြင့် လှပကာ အတောင်ပံဖြန့်တန်းထားသော သတ္တဝါများက ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပီတိများရှိခဲ့သည့် အရာအားလုံးကို ဆန်းစစ်နေကြသည်။ သူတို့ခြေချသောနေရာရှိမြေပြင်တစ်ခုလုံး သေဆုံးရသည်။ မြက်ပင်များသာမက မြေကြီးကိုယ်တိုင်ပါ သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်ရှိသော အရာအားလုံး ဘာမျှမကျန်အောင် ချေဖျက်ခံနေရသည်။
Eredar လူမျိုးများကို Sargeras ကလုပ်ဖို့ ကြံနေသည်မှာ ဤကဲ့သို့အရာပင်ဖြစ်သည်။
သူရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောခဲ့သော "တိုးတက်မှု"ဆိုသည်မှာ သည်အရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Velen တို့ လူမျိုးများ Sargeras နှင့် ပူးပေါင်းမိပါကဒီလို မကောင်းဆိုးဝါးများ
ဒီလို man'ari များ..။
ဒီလို အဖြစ်မျိုးမှာ ဤတစ်ခုတည်းဖြစ်မည် မဟုတ်ကြောင်း Velen နားလည်လိုက်သည်။
ဤလောကတစ်ခုတည်း ပျက်သုဉ်းမည် မဟုတ်ချေ။ လောက တစ်ဒါဇင်လောက်လည်း မဟုတ်၊ တစ်ရာလည်း မဟုတ်၊ တစ်ထောင်လည်းက မည်မဟုတ်ပေ။
သူ Sargeras ကို ယုံကြည်မိလိုက်လျှင် အရာအားလုံး ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။ ဤမကောင်းဆိုးဝါး အုပ်စုသည်
Kil'jaden တို့ Archimonde တို့ရော သူနှင့်ပါအတူ ပိုမိုကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ အသက်ရှိသော အရာအားလုံးသည် Velen အာရုံရခဲ့သော မြေကြီးလို အသက်မဲ့ သေဆုံးကာ မည်းညစ်သည်အထိ သူတို့ ရပ်တန့်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ Sargeras ရူးသွားတာလား၊
ဒါမှမဟုတ် သိသိကြီးနှင့် တမင်လုပ်နေတာလား။ Velen တစ်ကိုယ်လုံး သွေးနှင့် ချော်ရည်များလောင်းချခံလိုက်ရကာ မီးလောင်သလိုသလို ခံစားလိုက်ရသဖြင့်
Back to Book Next
pyiphyope 13.04.2020, 16:28 5
There is no author to translate about WOW. This author translation skills is perfect. I wish to him that plz more write about WOW. thx u so much Sir Lia K.
Hsu Yamin Myat 10.11.2019, 17:31 5
Lia K 13.11.2019, 15:56
Yamin Kyaw Thu 25.10.2019, 11:59 5
Lia K 13.11.2019, 15:54
Hla Yamoun Aye 23.10.2019, 15:45 5
Lia K 13.11.2019, 15:55
KhinhtweN 13.10.2019, 14:41 4.5
iPhyu 12.10.2019, 18:42 3.5
Htin Aung Lwin 12.10.2019, 18:36 5
Great for Gamers.Must read.
Tun Zarni Kyaw 12.10.2019, 16:35 4.3
We have received your subscription. We will let you know soon!
Please don't leave our website yet!
Login our website to access all our BookCubicle features.
Technical Support: contact-us@bookcubicle.com
2021 © BookCubicle. All rights reserved